Agaasimaha Guud ee ILO oo Kulan La Qaatay Madaxa Ururada Shaqaalaha Soomaaliyeed – SBC
Agaasimaha Guud ee ILO oo Kulan La Qaatay Madaxa Ururada Shaqaalaha Soomaaliyeed
Posted by admin on September 16, 2016 Comments
Agaasimaha guud ee hay’adda shaqada aduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ILO Guy Ryder ayaa kulan kula qaatay xafiiskiisa ku yaala xarunta ILO ee magaalada Geneva Xoghayaha Guud ee Xiriirka Ururada Shaqaalaha Soomaaliyeed ee FESTU Cumar Faaruuq Cusmaan.
Xoghayaha Guud ee FESTU ayaa kulanka ugu warbixiyay xaalada adag ee ay ku shaqeeyeen ururada shaqaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan dhibaatada lagu hayo qeybaha kala duwan sida handadaada, caga jugleynta, xanibaada iyo faragelinta lagu hayo arrimaha u gaarka ah ururada shaqaalaha Soomaaliyeed. Cumar Faaruuq ayaa sidoo kale u sheegay Agaasimaha guud ee ILO in wadooyin fara badan loo marayo sidii loo dhibaateyn lahaa ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ee xorta ah ee madaxa banaan.
Agaasimaha Guud ee ILO Guy Ryder ayaa dhinaciisa soo dhaweeyay Xoghayaha Guud ee FESTU oo isla markaana ah Xoghayaha Guud ee NUSOJ Cumar Faaruuq Cusmaan waxaana uu walaac weyn uu ka muujiyay agaasimaha guud ee ILO xaalada adag ee khatarta ah ee ay ku shaqeeyaan ururada shaqaalaha Soomaaliyeed. Guy Ryder waxaa uu hoosta ka xariiqay in ILO ay si buuxda u sii wadayso taageerada ay u hayso FESTU iyo ururada ku bahoobay ayna sii xoojiseyso ILO difaacitaanka xuquuqda ururada shaqaalaha Soomaaliyeed.
Cumar Faaruuq Cusmaan ayaa u mahadceliyay Agaasimaha Guud ee ILO iyo masuuliyiinta sar sare ee ILO kuwaasoo isku taxluujiyay in wada shaqeyb weyn ay la yeeshaan ururada shaqaalaha Soomaaliyeed isla markaana ay difaacaan ururada shaqaalaha iyo doorkooda kaga aadan bulshada Soomaaliyeed.
Guddiga xukuma ILO ayaa lagu wadaa in uu dhawaan kasoo saaro go’aano cusub oo quseeya Soomaaliya gaar ahaan xuquuqda, xoriyada iyo madax-banaanida ururada shaqaalaha Soomaaliyeed.